Gazety Rosiana Mahaleotena Nampiato Ny Lefitry Ny Tonian-dahatsoratra Noho Ny Fanafintohinana Fanaovana Kendaroroka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Mey 2016 6:07 GMT
Noho ny antsafa nivoaka tamin'ny 20 Mey tao amin'ny Lenta.ru nifanaovana tamin'ny mpandrindra ny vondrom-piarahamonina Vkontakte “Morye Kitov” (Ranomasin'ny Trozona) no nitarika ny fampiatoana an'i Sokolov (izay mijanona manan-kery mandra-piandry ny fanadihadiana anatiny). Nilaza tamin'ny Lenta.ru ity tovolahy tsy mitonona anarana ity fa niresaka tamin'i Natalia Sokolova, tonian-datsoratra ao amin'ny Fahitalavitra Novaya Gazeta izy, izay nametraka fisian'ny “fiarahamiasa” avy amin'ny gazety tamin'ny fisamboran'ny polisy ilay mpandrindran'ny vondrom-piarahamonina Vkontakte iray hafa (Fantatra fa tantara noforonina ilay fisamborana).
Tao amin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny mpandrindra ny “Morye Kitov”, dia nanaiky i Sokolova fa ny tatitra fanadihadiana navoakan'ny Novaya Gazeta tamin'ny 16 Mey momba ny vondrom-piarahamonina Vkontakte manery ny tanora amin'ny fikitihina ny ain'izy ireo dia mety hitarika mankany amin'ny fanesorana ny fiainana an-takonana [ny fanafenana ny anarana] ao amin'ny RuNet (mametraka ny “Aterineto amin'ny alalan'ny pasipaoro”), na dia milaza aza ravehivavy fa manohitra ny fiovana tahaka izany izy. Vantany vao nampitandrina ravehivavy, dia nanokatra raharahan-keloka bevava ny mpanao famotoran'ny fanjakana ao St. Petersburg tamin'ny 20 Mey amin'ny lalàna federaly miady amin'ny fandrisihana ny hafa hamono tena. Mety hitondra hatrany amin'ny fanagadrana dimy taona ny ambony indrindra ny fanamelohana.
Famoizam-po tsy voakarakara no antony voalohany mahatonga ny famonoan-tena. Azo tsaboina ny famoizam-po ary azo sorohina ny famonoan-tena. Mety mahazo fanampiana avy amin'ny laharan-telefonina fanohanana amin'ireo mitady hamono tena na tratran'ny krizy ara-pihetseham-po ianao. Tsidiho ny Befrienders.org raha hijery laharana fanampiana momba ny fisorohana ny famonoan-tena ao amin'ny firenenao.[naotin'ny mpanitsy amin'ny teny malagasy: indrisy fa tsy misy ny mpanolo-tsaina misoroka izany rehefa nijery ny tranonkala aho hatreto, asa sao dia mahafantatra ianareo?]